4 Faaido Iyo 7 Dhibaato Oo Uu Shaahu Leeyahay - Daryeel Magazine
4 Faaido Iyo 7 Dhibaato Oo Uu Shaahu Leeyahay
Shaahu wuxuu kamid yahay nolol maalmeedka dadkeena soomaalida ah, meelaha qaar sida miyigane waxaaba loo cabaa si ka badan biyaha, hadaba geedkaa saaxibka la’ah soomaalida waa maxaay? Muxuu faa’iido leeyahay? Muxuuse dhibaato leeyahay?
-FAA’IIDOOYINKA: (Shaaha cagaaran ama akhtarka ah ayaa ka faa’iida badan kan madow ee ey soomaalidu cabto)
1. SHAAHA & CHOLESTEROL: Shaaha waxaa ku jira maadooyin yareynaya cholesterol-ka xun, waa nooc kamid ah dufanta oo hadii uu kor u koco keeni kara dhibaatooyin badan oo caafimaad.
2. SHAAHA & CUDURADA WADNAHA: cabida shaaha wuxuu yareeyaa fursadaha cudurada wadnaha, wadooyinka uu ku yareeyana waxaa kamid ah yareynta cholesterol-ka ee aanu soo sheegnay, dufanta badata waxey xidhi kartaa xididada waraabiya wadnaha, waana sababta ugu weyn ee keenta cudurka wadna xanuunka.
3. SHAAHA & KANSARKA (CANCER): Cilmi-baadhis la sameeyay ayaa ku doodeysa in shaahu uu yareeyo fursadaha kansarka (cancer), in kastoo ey qodobkan dood badani ka taagantahay, hadane waxaa suurta-gal ah in uu shaahu yareeyo fursadaha kansarka.
4. FAA’IIDOOYINKA KALE: waxaa jiro faa’iidooyin badan oo shaahu u leeyahay jidhka, sida firfircooneynta maskaxda, difaaca jidhka, kor u qaadida metabolism-ka, nafaqeynta jirka (marka lagu darsado caanaha), iyo faa’iidooyin kale.
1. SHAAHA & QALAJINTA JIdhKA: Maadada caffeine waxey qabataa shaqooyin biyo saarid (diuretic) oo waxey badisaa kaadida, Shaaha waxaa ku jira sadax meelood hal meel maadada caffeine marka loo eego kafeya ama qaxwada, hadii loo cabo si xadidan ma keenayo qalajin, balse hadii loo cabo si xad dhaaf ah wuxuu keenaa kaadi badan, wuxuuna qalajin karaa jirka, sidaa darteed dadka caba shaaha badan (6 koob/+ maalinti) waxaa haboon in ey badsadaan cabida biyaha, dadka cabo kafeygana waa lagama maarmaan in ey badsadaan cabida biyaha.
2. SHAAHA & KILYAHA: shaaha waxaa ku jirta maadada Oxalate oo hadii loo qaato si xad dhaaf ah keeni karta kilyaha oo dhagax fadhiistaan.
3. SHAAHA & LAFAHA: shaaha waxaa ku jirta maadada Fluoride oo hadii si saa’id ah loo isticmaalo keeni karta cudurka loo yaqaano osteofluorosis oo ah cudur ku dhaca lafaha oo keena in ey adkaadaan una fududaadaan in ey jabaan.
4. SHAAHA & DAWOOYINKA: qaadashada dawooyinka qaar waxey u baahanyihiin in la yareeyo shaaha, sidaa darteed hadii qofku qaadanayo dawo waxaa haboon in uu dhaqtarkiisa kala tashto hadii uu shaaha u cabo si saa’id ah.
5. SHAAHA & CUDURADA: dadka qaba cudurada wadnaha, indhaha, maskaxda, dhiigkarka, iyo sokorta waxey u baahanyihiin in si taxadar leh u isticmaalaan shaaha, islamarkaane dhaqtar la tashadaan hadii uu balwad ku noqday cabida shaaha
6. SHAAHA IYO UURKA: shaahu wuxuu yareeyaa in birta (iron) si sax ah jidhku u qaato, haweenka uurka leh waxa ay u baahan yihiin maadada iron, sidaa darteed shaaha badan wuxuu keeni karaa dhiig la’aan. In ka badan 3 koob maalinkii waa ka mamnuuc haweeneyda uurka leh.
7. SHAAHA & KANSARKA PROSTATE-KA: waxaa jirta daraasad 2012-ki la sameeyay oo sheegeysa in shaaha badan uu keeno karsarka prostate-ka, laakin ma ahan daraasad leh awood badan oo cilmiyeysan, mana cada ilaa iyo hada in shaahu uu keeno kansar, waxaana ka wood badan hadalada cilmi baadhista odhaneysa in shaahu uu yareeyo kansarka
Qallinkii Deeqa Cali Saalax
Sirta Caafimaad Iyo Shaaha Liinta Leh Faa’iidooyinka Cajiibka Ah Ee Muusku Jidhkeenna U Leeyahay FAYTAMIIN C: Muhiimadda Uu U Leeyahay Wadnaha Iyo Caafimaadka Qofka Faaidada Beytaraafku U Leeyahay Dadka Qaba Dhiig-karka Iyo Wadne Xanuunka